သည်းခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာ တခုရှိပါတယ် – အဲ့ဒီ သည်းခံခြင်းတရားရဲ့ နယ်နိမိတ် အဆုံးရဲ့ဟိုတဖက်မှာ အလုံးစုံ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့ နယ်နိမိတ် အစဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – နယ်နိမိတ်စည်းတွေကို…စောင့်ထိန်းကြစေချင်ပါတယ်… | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeသည်းခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာ တခုရှိပါတယ် – အဲ့ဒီ သည်းခံခြင်းတရားရဲ့ နယ်နိမိတ် အဆုံးရဲ့ဟိုတဖက်မှာ အလုံးစုံ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့ နယ်နိမိတ် အစဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – နယ်နိမိတ်စည်းတွေကို…စောင့်ထိန်းကြစေချင်ပါတယ်…
သည်းခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာ တခုရှိပါတယ် – အဲ့ဒီ သည်းခံခြင်းတရားရဲ့ နယ်နိမိတ် အဆုံးရဲ့ဟိုတဖက်မှာ အလုံးစုံ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့ နယ်နိမိတ် အစဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – နယ်နိမိတ်စည်းတွေကို…စောင့်ထိန်းကြစေချင်ပါတယ်…
April 18, 2017 drkokogyi
စိုးရိမ်ရတာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားအောင်….
အထင်မှန် အမြင်မှန်ရအောင်…ဖြေရှင်းဖို့…တဘက်အဖွဲ့အစည်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်……
မရိုးမသားနဲ့…မယုံမကြည်ဖြစ်နေတာကို…ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်လို့ မရပါဘူး.
အထင်အမြင်ဇွတ်လွဲမှားပြနေတာတွေကို …အမြင်မှန်ရအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး…
ကျွန်တော်တို့ဘက်က…ဘယ်လောက် ပြေလည်မှုတွေ ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းနေပါစေ… အရာမထင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေပါတယ်….
စိုးရိမ်တာတွေ…အထင်လွဲတာတွေဟာ…ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနဲ့ ယှဉ်ပြီး… မရိုးသားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဖန်တီးနေလို့ပါဘဲ….
ဒါတွေကို တရားဥပဒေအပိုင်းက…စိုးမိုးမှုနဲ့ ငြိမ်းအေးစေရမဲ့အစား…. အုပ်ချု ပ်နေတဲ့ အစိုးရကိုယ်တိုင်က…ဥပဒေစံနှုန်းအမျိုးမျိုးထားပြီး…မွတ်စလင်တွေအပေါ်..ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံနေတော့ …ရှင်းလို့ကို မပြီးနိုင်တဲ့ အမယ်ဘုတ်ရဲ့ ချည်ခင်လို ဖြစ်နေတော့တာပေါ့….
တဖက်မှာကလဲ…ဒီလိုပြသနာတွေ လုပ်ပေးနေမှ ဆွမ်းတွေကွမ်းတွေလှိုင်လှိုင်ပေါ…လာဘ်လာဘတွေ မြိုင်…နေရာတကာ လူစွာလုပ်နေရတော့….စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာသူ…တရားမရှိသူအရေအတွက်ဟာ…တဖြည်းဖြည်း…တိုးလာနေတာ… တွေ့ရပါတယ်…
အကြောင်းကြောင်း ကြောင့်…အဲ့ဒီ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေနဲ့ လက်မတွဲတဲ့သူတွေကလဲ….မွတ်စလင်တွေဘက်ကို ပူး…ပေါင်းပြီးတော့…စာနာမှုရှိသယောင်…စကားအလှလေးတွေပြောပြီး…ဂွင်ဖန်စားနေသူတွေလဲ…တွေ့လာရပါတယ်….
ကိုယ့်မွတ်စလင်တွေထဲကလဲ…ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့..(အမှန်ကတော့…တဖက်မှာ..ဘုန်းကြီးတွေပါတာရယ်…လူအင်အားများတာရယ်ကို ကြောက်ကြတဲ့စိတ်က အဓိကပါ)…ကိုယ့်အချင်းချင်း…မင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာ…မင်းမုတ်ဆိတ်ထားလို့ဖြစ်တာ…မင်းအင်္ကျီအရှည်ဝတ်လို့ဖြစ်ရတာ..
မင်းခေါင်းမီးခြုံလို့ ဖြစ်ရတာ…မင်းတို့…ကလဆတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာ…မင်းတို့ ခေါ်တောတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာ….လို့…အသံကောင်းတွေလွှင့်လာပါတယ်….
မုတ်ဆိတ်ကြောင့်ပြသနာတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်သလို…အင်္ကျီရှည်ကြောင့် ဘုရ်ခါကြောင့် ပြသနာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ မဟုတ်ပါ….
ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားကို လိုက်ပြီးပြသနာရှာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်…. ခင်ဗျားတို့ ဘာလုပ်ပေးပေး…တခုပြီးတခု..အတွန့်တက်လာနေကြဦးမှာပါ….
နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်…စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် တွေအတွက် ဦးတည်ဖန်တီးနေတဲ့ပြသနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်….
တတ်နိုင်လို့…မွတ်စလင်တွေအားလုံးက…ဗုဒ္ဂဘာသာကိုဘဲ ကိုးကွယ်လိုက်ပါပြီ…ယောင်္ကျားမှန်သမျဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ပါပြီ ဆိုရင်လဲ….ပြသနာက နောက်တမျိုး နောက်တဖုံ…ဖန်တီးလာကြဦးမှာပါ……
အဲ့ဒီ …သည်းခံခြင်းတရားရဲ့ နယ်နိမိတ် အဆုံးရဲ့…ဟိုတဖက်မှာ….
အလုံးစုံ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့ နယ်နိမိတ် အစဘဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
← Health Minister: Income tax payment system for doctors
အင်စထစ်ကျူးရှင်းနဲ့ လုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိသူက အင်စထစ်ကျူးရှင်း ခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်တက်လုပ်တဲ့အခါ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု သဘောအရ တိုင်းပြည်ရဲ့ တိုးတက်မှုက ဆုတ်ယုတ်မသွားဘူး Any powerful dictator would destroy the Separation of Powers with Checks and Balances in proper Democracy which follows the Rules of written laws →
2 thoughts on “သည်းခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာ တခုရှိပါတယ် – အဲ့ဒီ သည်းခံခြင်းတရားရဲ့ နယ်နိမိတ် အဆုံးရဲ့ဟိုတဖက်မှာ အလုံးစုံ ပျက်သုန်းခြင်းရဲ့ နယ်နိမိတ် အစဘဲ ဖြစ်ပါတယ် – နယ်နိမိတ်စည်းတွေကို…စောင့်ထိန်းကြစေချင်ပါတယ်…”
ကျေးဇူးပြုပြီး….မဆဲဆိုကြပါနဲ့ဗျာ…..
အထူးသဖြင့်…ဗုဒ္ဒဘာသာသာသနာနဲ့ သံဃာတွေကိုရော…အခြားဗုဒ္ဒဘာသာ ၀င်တွေကိုရော…မဆဲကြပါနဲ့….
ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ဘုန်းကြီးအတုအယောင်တွေက…အခုလိုလက်လွတ်စပယ် လုပ်ပြီး…စော်ကားလိုက်တာလေးနဲ့တင်…သာသနာတော်လည်း…ညှိုးနွမ်း
သံဃာတွေလဲ…သိက္ခာ ကျသွားရပါပြီ….
စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေလဲ…စိတ်နှလုံး…ညှိုးငယ်နေရပါပြီ……
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ…ဘာမှ မဟုတ်ဘူးလို့..ထင်ရပေမဲ့…ရုပ်ပုံ ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ
ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့ပါပြီ…တကမ္ဘာလုံးက သိသွားကြပါပြီ…..
ချီးကျူးဂုဏ်ပြု နေကြလိမ့်မယ်လို့များထင်နေကြပါသလား….
ပိုဆိုးတာက…ပို့စ်တိုင်း ပို့စ်တိုင်းရဲ့အောက်မှာ…အဆိုးမြင်ပုံစံနဲ့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း…ထပ်ဆင့်စော်ကား…ရေးသားထားတဲ့ ကွန်မင့်တွေ….
ဟုတ်ကဲ့…နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ…အဲ့ဒီလို ကော်မင့်တွေကို စုဆောင်း ဘာသာပြန်ပြီး မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေရှိနေပါတယ်….
မဘသ တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံတာ ကန့်ကွက်တာဟာ သူတို့ သာသနာ
သူတို့လူမျိုးတွေ..ရွေးချယ်ရမဲ့အလုပ်ပါ….
သူတို့ ကြို က်တဲ့ လမ်း..သူတို့ရွေးကြပါစေ….
သူတို့ သာသနာနဲ့ သူတို့….
ကျွန်တော်တို့ သာသနာနဲ့ ကျွန်တော်တို့….
သူတို့သာသနာကို ကျွန်တော်တို့က ဘယ်တော့မှ ကိုးကွယ်မှာ မဟုတ်သလို….
ကျွန်တော်တို့ သာသနာကိုလဲ သူတို့က ဘယ်တော့မှကိုးကွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး..
ဘယ်သူ တရား…ဘယ်လောက်ပျက်ပျက်…..ကိုယ်မပျက်ပါစေနဲ့……
သိစေလိုတာပါဗျာ
ကျနော်တို့က ရန်လိုနေတာမဟုတ်ဘူး
ကျနော်တို့က အစွန်းရောက်နေတာမဟုတ်ဘူး
ကျနော်တို့က လူညံ့တွေမဟုတ်ဘူး
သည်းခံရင်း သည်းခံရင်းနဲ့ ညံ့ကုန်ကြတာ
ကျနော်တို့က ဇ မရှိတာမဟုတ်ဘူး
တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ တိုင်းပြည်နာမှာစိုးလို့
ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ် ချိုးနှိမ်ရင်း လူကြောက်တွေလို့ အထင်ခံနေရတာ
ခင်ဗျားတို့ဖက်က ရိုင်းပြ စော်ကားသလို တုန့်ပြန်ရရင်
ဘယ်သူ့အတွက်မှ မကောင်းနိုင်လို့ ကြိတ်မှိတ် နေ နေရတာ
ကျနော်တို့ ရင်ကြားမစေ့တတ်တာမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ အောက်တန်းကျခံပြီးလုပ်တဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေး
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုနဲ့ အာမခံ ယှဉ်တွဲပေး
ကျနော်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ နေရာကလုပ်ပြမယ်
ခင်ဗျားတို့ထက် သာတယ်ဆိုတာနားလည်ထား
ဒီကနေ့ ဒေါသဖြစ်စရာတွေ ကြုံ ထားရတာတောင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်တွေရဲ့ အရေးအသားတွေ တွေ့မိတော့
ကိုယ်ကတောင် ပြန်ပြီး အားနာမိသေးတယ်
ဒီကနေ့ ရွှေတိဂုံဘုရားခြေရင်းက အဖြစ်အပျက်မျိုးက
ခနခန ဖြစ်လာရင် မကောင်းဘူးဆိုတာကိုတော့ယုံ
စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းရှင်လူတွေ အိပ်မနေကြပါနဲ့
စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးကို
ရဟန်းအတုအယောင်တွေကို ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းကြပါတော့